Silicone roba - Changzhou longxin Machinery Co., Ltd
Silicone roba bụ a roba onye isi yinye na-emi esịnede sịlịkọn na oxygen atọm alternately, na e nwere ndị na-emekarị abụọ organic iche iche jikọọ sịlịkọn atọm. Ọ nwere ezigbo ala okpomọkụ-eguzogide ma na ka nwere ike na-arụ ọrụ -55 ℃.
E nwere ọtụtụ ụzọ nke edida silicone roba. Dị ka ụdị tupu ya agwọọ, ọ nwere ike kere n'ime ime ụlọ okpomọkụ vulcanized silicone roba, elu okpomọkụ vulcanized silicone roba. Dị ka monomer eji, ọ nwere ike kere n'ime methyl vinyl silicone roba, methyl phenyl vinyl silicone roba, fluorosilicone, nitrile silicone roba na na. Na dị ka iche iche na arụmọrụ ma were, ọ nwere ike kere n'ime n'ozuzu ụdị, super ala okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ụdị, super elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ ụdị, elu ike ụdị, mmanụ na-eguzogide ọgwụ ụdị, ọgwụ ụdị na na.
Nwere ike ikwu ngwá maka ntecha mmepụta: LXQLF Series Multi-ọrụ Triple aro igwekota, LXQLFQ Series enwekwukwa Multi-ọrụ Triple aro igwekota, LXXJB usoro mbara igwekota, LXDLH Series mbara ike igwekota,